အာဆင်နယ် အသင်းသား နှစ်ဦးဟာ အာတီတာ အတွက် အဓိက ပြဿနာ ဖြစ်နေကြောင်း ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တဲ့ အလန်စမစ် - SPORTS MYANMAR
ဂန်းနား တိုက်စစ်မှူးဟောင်း အလန်စမစ် က ဝီလီယံ နဲ့ နီကိုလပ်စ် ပေပေ တို့ ခြေစွမ်း မပြနိုင်တာဟာ အာတီတာ အတွက် ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာ တစ်ရပ် ဖြစ်နေကြောင်း သုံးသပ် ပြောကြား လိုက်ပါတယ် ။
ပေပေ နဲ့ ဝီလီယံ တို့ဟာ မနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ ဆောက်သမ်တန် အသင်းနဲ့ ပွဲမှာ ပွဲထွက် ကစားခဲ့ကြပြီး ခြေစွမ်းပြ ကစားနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး ။ ဝီလီယံ ဟာ ဒီရာသီမှ အာဆင်နယ် ကို ရောက်လာတာ ဖြစ်ပေမယ့် ပွဲ ၂၀ ကစားရာမှာ ဂိုးပေါက်တည့် ကန်ချက် ၂ ကြိမ်သာ လုပ်ထားနိုင်တဲ့ အထိ ခြေစွမ်းပိုင်း ကျဆင်း နေပါတယ် ။
စံချိန်တင် ပြောင်းရွှေ့ကြေးရှင် နီကိုလပ်စ် ပေပေ ဟာလည်း အခုထိ အသင်းအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေ ပြသဖို့ ရုန်းကန် နေရဆဲ ဖြစ်ပြီး မနှစ်ကထက်တောင် ခြေစွမ်းပိုင်း ကျဆင်း သွားခဲ့ပါတယ် ။
အလန်စမစ် က Stadium Astro မှာ ပေပေ ဟာ သူ့ရဲ့ တန်ကြေး နဲ့ ထိုက်တန်ကြောင်း ပြသပြီး အဓိက ကစားသမား ဖြစ်လာမယ်လို့ ထင်သလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ” ကျွန်တော်က သိပ်မသေချာဘူး လို့ ထင်ပါတယ် ။ အခုက သူ့ရဲ့ ဒုတိယရာသီ ရောက်နေပီ ဖြစ်ပေမယ့် လိဂ် နဲ့ အသားကျအောင် လုပ်နေရဆဲပါ ။ ”
“သူက မှော်ဆန်တဲ့ အရာတွေကို လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ ကစားသမားတွေထဲက တစ်ဦးပါ ၊ အတွင်းထဲ ဆွဲဝင်ပြီး ဂိုးအပေါ်ထောင့်ကို ကန်သွင်း နိုင်ပါတယ် ၊တခြား အခြေအနေတွေမှာတော့ သူ့ရဲ့ ဘောလုံး ဉာဏ်ရည် ဉာဏ်သွေးက နည်းပါးလွန်းပါတယ် ။ ”
” ပြင်သစ်မှာ ထင်တုန်းကြဲ ခြေစွမ်းပြ ခဲ့တဲ့ သူ မဟုတ်တော့ပါဘူး ၊ သူ့အတွက် ပေးခဲ့ရတဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ကို သွားပြောလို့တော့ မရပါဘူး ၊ သူ့ အမှားမှ မဟုတ်တာဗျာ ။ အဓိက အချက်က အာဆင်နယ် က သူ့အတွက် ငွေတွေ အများကြီး သုံး ခဲ့ရတာပါ ။ ”
” သူ့ကို အခု ရောင်းလိုက်ရင်လည်း အများကြီး ရှုံးမှာပါ ၊သူတို့ အိုဇေးလ် ပြဿနာ ကို ဖြေရှင်း နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဝီလီယံ နဲ့ ပေပေ ပြဿနာက ရှိနေဆဲပါ ။ ”
ဝီလီယံ ရုန်းကန်နေရမှု အပေါ် စမစ် က ” ကစားသမား ရဲ့ ခံယူချက် နဲ့ မူတည် ပါတယ် ။ သူ့ဆီမှာ အသင်းအတွက် ကစားပေးချင်စိတ် ၊ ဂိုးဆာလောင်စိတ် မရှိရင် သူ့ဆီက စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေ မြင်ရဖို့ မရှိပါဘူး ။ အာတီတာ တစ်ယောက် လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာ ဝီလီယံ နဲ့ အလုပ်တွဲလုပ် နိုင်သလား ? ဝီလီယံ ဆီက ဒီထက် ပိုကောင်းတာတွေ ရအောင် လုပ်နိုင်မှာလား ? ။ ”
” ဝီလီယံ က ချဲလ်ဆီးမှာတုန်းက ဒီလို မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ၊ အပတ်စဉ်တိုင်း ဂိုးပေါက် ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ လုပ်နိုင်ခဲ့သူပါ ၊ အာဆင်နယ် ကို ရောက်လာချိန်မှာ ဒါတွေကို မမြင်တွေ့ ရပါဘူး ၊အာတီတာကလည်း သူ့ဆီက အဲ့ဒီအရာတွေ လိုချင်တာကြောင့် ခေါ်တာပါ ။ ”
” အာတီတာ က အိုဇေးလ်ကို အသင်းက ချန်လှပ်ဖို့ အပြင်းအထန် ကြိုးစား ခဲ့ရ ပါတယ် ၊ အခုဆို ဝီလီယံ နဲ့ ပေပေ ဘက် လှည့်ပီး သူ ဘာလုပ် နိုင်သလဲ ဆိုတာ အ​ဖြေ ရှာရမှာပါ ။ ”
” ဝီလီယံ က အာဆင်နယ် ကို ဘာကြောင့် ပြောင်းလာတာလဲ ဆိုတာ ကြည့်ရရင် ငွေကြောင့်ဆိုတာ သိသာပါတယ် ၊ သူက အသင်းအတွက် ကစားပေးချင်စိတ် ​ပျောက်ဆုံး နေပါတယ် ၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေလည်း မပြသနိုင်ပါဘူး ၊ မန်နေဂျာ အတွက် အဓိက ပြဿနာ ပါပဲ ။ ” လို့ ပြောကြား သွားခဲ့ပါတယ် ။